နင့်အသားရေလေးလိုချင်လိုက်တာဟယ် လို့တောင် ဖြစ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး | CosmeticMyanmar
Home » Article » နင့်အသားရေလေးလိုချင်လိုက်တာဟယ် လို့တောင် ဖြစ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး
နင့်အသားရေလေးလိုချင်လိုက်တာဟယ် လို့တောင် ဖြစ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး
အသားရည်လေးက စိုစိုပြေပြေလေးနဲ့လှလိုက်တာဆိုပြီး အပြောခံရဖူးလား? ဒါကမဆန်းတော့ပါဘူးနော်။ အသားရေကဖြူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ စိုပြေနေတာပါ။ မြန်မာပြည်က မိန်းကလေးတိုင်း ညိုတဲ့အသားရေကိုမကြိုက်ကြဘူးဆိုတာ သိနေတယ်လေ။ အယောက် ၁၀၀လောက်ကို စစ်တမ်းကောက်လိုက်ရင်တောင် ၉၉ ယောက်လောက်က ဖြူချင်တယ်ပဲပြောကြမှာ တကယ်တော့မြန်မာတွေရဲ့အသားရေတွေက မမည်းပါဘူး။ ညိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ တမျိုးလှနေတာပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့မည်းချင်လွန်းလို့ beach တွေမှာ နေပူစာလှုံလိုက်ရ, suntanned cream တွေလိမ်းလိုက်ရနဲ့ ညိုချင်နေကြတာပါ။ ဒီတော့ သူတို့လိုချင်နေတဲ့အသားရောင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မြန်မာမလေးတွေက နဂိုအသားရောင်လေးကို တန်ဖိုးထားပြီးပိုချစ်ရမှာပေါ့။
ထွေထွေထူးထူးဘာမှမလိုပါဘူး။ အဲ့ဒါလေးကတော့ body lotion ပါ။ Body lotion မှာမှ Whitening , Moisturizing, Firming, Nourishing စသဖြင့် စျေးကွက်ထဲမှာ ပုံစံမျိုးစုံကို ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်က ဖြုချင်တာလား? Whitening ပါတာလေးသုံးပေါ့။ ရေဓါတ်တွေခန်းခြောက်ပြီးအသားတွေမွဲခြောက်နေတာလား? Moisturizing , Nourishing တစ်ခုခုကိုသုံးပေါ့။ နှစ်ခုလုံးပါတာသုံးရင်ပိုတောင် အဆင်ပြေတာပေါ့။ အသားရေတွေက လျော့ရဲပြီး တင်းရင်းမှုမရှိဘူးထင်နေရင် firming လို့ပါတာလေးကို သုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါလေးတွေကအခြေခံသုံးသင့်တဲ့အရာလေးတွေပါ။
လိမ်းသင့်ဆုံးအချိန်ကတော့ ရေချိုးပြီးခါစအချိန်ပါ။ ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ အသားရေကနူးညံ့နေလို့ အသားထဲစိမ့်ဝင်တာပိုမြန်ပါတယ်။ တစ်နေ့နှစ်ခါရေချိုးရင် နှစ်ခါလိမ်းပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။ အရင်တုန်းကဆို ရေချိုးပြီးတာနဲ့ သနပ်ခါးလိမ်းတတ် ကြတယ်လေ။ သနပ်ခါးကအသားဖြူစေတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတယ်။ တကယ်လည်း မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။ သနပ်ခါးက အသားခြောက်တတ်တော့ ကြာကြာလိမ်းရင် အသားရေကခြောက်လာတတ်ပါတယ်။ သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့သူတွေက သနပ်ခါးအစား Body lotion ကိုလိမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ သနပ်ခါးကိုမလိမ်းရရင်မနေနိုင်တဲ့သူတွေက ညဖက်ဖြစ်ဖြစ်, အပြင်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်တော့ စျေးအချိုဆုံးကို ဝယ်ပါ။ အဲ့လိုပြောလို့ စျေးပေါတာကိုအားပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ budget ကို ချိန်ပြီး ဝယ်ပါ။ စျေးကြီးတာကြီးဝယ်ထားပြီးဘူးလေးကသေးသေးလေးမို့ နှမြောပြီး မလိမ်းရင်လည်း ဘာမှမထူးဘူးလေ။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ စျေးလောက်ဝယ်ထားတော့ ကုန်သွားရင်တောင် ထပ်ဝယ်ဖို့မတွန့်လောက်တော့ပါဘူး။
ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ ရေများများသောက်ပေးပါ။ body lotion တွေဘယ်လောက်လိမ်းလိမ်း ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့ အစားအသောက်တွေ, ရေမသောက်ဘဲ ကော်ဖီမစ်တွေ, အချိုရည်တွေသောက်နေရင်လည်း အသားရေကစိုပြေသင့်သလောက်စိုပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်။
Admin ပြောတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်သွားရင် တွေ့တဲ့သူတိုင်းက နင့်အသားအရည်လေးလိုချင်လိုက်တာဟယ် ဖြစ်သွားမယ်